Societytù Na-ahụ Maka Ntanetị Na-ekwupụta Mmekọrịta Iji Na-enwe Ọganihu Digital Economy Na Etiopia
Internetlọ ọrụ Internetntanetị na-akwado ịkwado Etiopia na ọhụụ ya ịmepụta akụ na ụba dijitalụ site na Digital Ethiopia 2025 Strategy
Ministri nke Innovation na Teknụzụ (MINT) nke Etiopia na Otu Intanet kwuputara nkwekọrịta mmekorita ohuru taa nke ga enyere aka kwalite onodu aku na uba dijitalụ ma mee mgbanwe mgbanwe aku na uba.
N'afọ gara aga, gọọmentị nke Etiopia kwalitere atụmatụ mgbanwe mgbanwe dijitalụ ya na ebumnuche nke itinye teknụzụ dijitalụ iji kwalite mmepe na uto maka nwa amaala ọ bụla.
Mmekọrịta dị n'etiti MINT na Internet Society ga-akwado mmejuputa atumatu a iji nyere mba ahụ aka ịzụlite ọrụ dijitalụ iji kwalite ngalaba ndị dị mkpa na-eme ka akụ na ụba dị ka ọrụ ugbo, ọrụ mmepụta ihe, ọrụ na njem.
Nkwekorita a ga-enye aka igbasa njikota n'ime ime obodo, wuo akụrụngwa nke Internetntanetị, ma wusie ike ọchịchị Internetntanetị.
Ebinyere aka na nkwekọrịta a na Mịnịstrị nke Innovation na teknụzụ n'oge nkuzi data dị omimi na ihe ngosi nke Onye isi Dr. Ahmedin Mohammed, Mịnịsta na-ahụ maka Innovation na Teknụzụ, Federal Democratic Republic of Ethiopia na Dr. Dawit Bekele, onye isi oche mpaghara nke Africa Internet Society.
Na ihe omume ahụ, Dr. Ahmedin kwuru, “Gọọmentị Etiopia esetịpụla Mgbanwe Dijitalụ nke akụnụba mba dị ka otu n’ime usoro ọ ga-ebute ụzọ.
Iji mezuo nke a, gọọmentị webatara ụzọ mbụ mbụ mgbanwe mgbanwe Digital nke bụ usoro nche anwụ nke ọhụụ nke mpaghara na ụlọ ọrụ nwere ike ịhazi ma ọ bụ mezie mbọ ha. ”
Onye Minista State kwukwara, “Usoro Digital 2025 nwere ebumnuche iji hụ ngbanwe dijitalụ na-arụ ọrụ dị mkpa maka ọganihu gụnyere; ọhụrụ na itinye omenala, omume, usoro na teknụzụ nke oge dijitalụ iji zaghachi ụmụ amaala welitere atụmanya. ”
Ọ gbakwụnyere, “Atumatu a gha aputa site na mmekorita ya na ntinye aka nke onye obula tinyere ndi ochichi, ndi na-achi ochichi, ndi oru mmepe na obodo.
Usoro a choro itinye aka na ike iji nwekwuo akụrụngwa, usoro iheomume, ngwa dijitalụ, na ime ka usoro okike dị. ”
“Mmekọrịta a na-abịa n’oge Etiopia na-ahapụ ngalaba nkwukọrịta nke ya nke kwekọrọ na ịba ụba akụrụngwa.
Anyị na-ebinye nkwekọrịta a iji bulie njikọta ime ime obodo ma hụ na onye ọ bụla nọ na Etiopia na-erite uru site na mgbanwe dijitalụ, kọwara Dr. Dawit Bekele.
Internetlọ ọrụ Internetntanetị na-akwado ịkwado Etiopia na ọhụụ ya ịmepụta akụ na ụba dijitalụ site na Digital Ethiopia 2025 Strategy.
Mkpakọrịta ahụ kwekọrọ na mbọ ndị Internetntanetị na-agba iji kwado mmepe na iji Internet dị ka akụ iji mee ka ndụ ndị mmadụ baa ọgaranya.
N'oge na-adịbeghị anya, ya na ndị Minista rụkọtara ọnụ iji hazie ogbako mmepe mbụ nke mba ahụ na ụlọ akwụkwọ nke Njikwa Ntanetị nke Etiopia.
Ka ọ dị ugbu a, ndị na-ahụ maka ịntanetị na-arụ ọrụ na Mịnịsta na nkwadebe nke Etiopia iji kwado Nzukọ Nzukọ Nkwukọrịta Worldwa na ịhazi ọzụzụ na isiokwu ndị dị elu dị ka sayensị data, ngọngọ na Internet nke Ihe.
Internetlọ ọrụ Internetntanetị na-arụkọ ọrụ na Etiopia iji kwado mmepe nke netwọkụ obodo na mpaghara Awi, Amhara State, ma na-enyere ụmụ okorobịa na ụmụ nwanyị aka ịmụta etu esi hazie, kesaa, ma dokwaa netwọkụ mpaghara dị na Bahr Dar.
Mkpakọrịta ahụ ga-enwe ike inwe ọbụna ọrụ na-emetụta mmetụta na Etiopia ma nyere mba ahụ aka ịbanye n'ime obodo dijitalụ.
Featured Image: Dr. Ahmedin Mohammed, Mịnịsta na-ahụ maka Innovation na Teknụzụ, Federal Democratic Republic of Ethiopia (n'aka ekpe) na Dr. Dawit Bekele, onye osote onye isi ala mpaghara mpaghara, Africa Internet Society (n'aka nri)